Ny satelita voalohany amin'ny satelita voalohany
Sputnik 1: Satellite Satellite Earth Voalohany
Tamin'ny 4 Ôktôbra 1957, ny Firaisana Sovietika dia nanangana ny satelita voalohany amin'ny aterineto, Sputnik 1 . Avy amin'ny teny Rosiana ny anarana iray ho an'ny "mpiara-mitory manerana an'izao tontolo izao." Baolina metaly kely izay lanjany 83 kilao monja (184 lbs.) Ary niparitaka an-habakabaky ny fiaramanidina R7. Ny satelita bitika dia nitondra mpandahateny sy mpandahateny radio roa ary anisan'ny tontolon'ny Firaisana Sovietika nandritra ny taona Geophysical International.
Raha ny siansa no siantifika, ny fanombohana sy ny famolavolana ny baolina dia nanamarika ny fanirian'ny firenena amin'ny toerana.
Ny Sputnik dia nanodidina ny tany indray mandeha isaky ny 96.2 minitra ary nampita vaovao momba ny atmôsfera tamin'ny alàlan'ny radio nandritra ny 21 andro. Vao 57 andro taorian'ny famoahana azy dia rava i Sputnik rehefa niverimberina ny atmosfera fa nampiseho ny vanim-potoana vaovao momba ny fitrandrahana. Ny asa fitoriana dia fahatairana lehibe ho an'izao tontolo izao, indrindra fa any Etazonia, ary niteraka ny fanombohan'ny vanim-potoan'ny vanim-potoana.
Fametrahana ny dingana ho an'ny vanim-potoana
Mba hahatakarana ny antony nanjo an'i Sputnik 1 , dia mijery ny faran'ny taona 1950. Nirotsaka an-tsehatra ny tontolo eran-tany. Ny Etazonia sy ny Firaisana Sovietika (Rosia amin'izao fotoana izao) dia mpifaninana miliara sy kolontsaina. Ireo mpahay siansa tamin'ny andaniny roa dia nampiroborobo ireo balafomanga mba haka tombom-barotra ho any an-toerana ary ireo firenena roa ireo dia te-ho voalohany indrindra hijery ny sisintany ambony. Fotoana vetivety monja talohan'ny nandefasana olona iray hanao asa fitoriana.
Ny Siansa Espaniola dia miditra amin'ny dingana lehibe
Raha ny siansa, ny taona 1957 dia niorina tamin'ny taona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (IGY), ary natao hifanandrify amin'ny tsingerin'ny masoandro mandritra ny 11 taona. Ny astronoma dia mikasa ny hitandrina ny Masoandro sy ny fitarihana azy eto an-tany mandritra izany fotoana izany indrindra indrindra amin'ny fifandraisana sy ny fanabeazana vaovao momba ny fizika ara-pahasalamana vao haingana.
Ny Akademia Nasionalin'ny Siansa Amerikana dia namorona komity iray hanara-maso ny tetikasa IGY amerikana. Anisan'izany ny fanadihadiana mikasika ny antsointsika hoe "toetr'andro": ny auroras, ny fiaramanidina, ny taratra cosmic, ny geomagnetisma, ny glaciology, ny gravité, ny iônôsfera, ny fanapahana ny lantihy sy ny latitude, ny meteorology, ny ranomasina, ny seismolojia, ny hetsika masoandro, ary ny atmosfera ambony. Ao anatin'izany, ny Amerikana dia manana planina ho an'ny fandaharanasa hanombohana ny satelita voalohany amin'ny artificial.
Tsy misy hevitra vaovao ny satelita artifisialy. Tamin'ny Ôktôbra 1954, ireo mpahay siansa dia nangataka ny hanombohana voalohany amin'ny IGY mba haka ny sarin'ny tany. Nanaiky ny Trano Fotsy fa mety ho hevitra tsara io, ary nanambara ny fikasana hanangana satelita miafina latabatra haka ny refin'ny atmosfera ambony sy ny vokatry ny rivotry ny masoandro. Ny manampahefana dia nanolotra tolo-kevitra avy amin'ireo sampan-draharaham-pikarohana isan-karazany mba handaminana ny fampandrosoana an'io iraka io. Tamin'ny volana Septambra 1955 dia nofidiana ny volavolan-dalàna momba ny Vavalard Naval Research. Nanomboka nanamboatra sy nandramana ny balafomanga ny ekipa, ary samy hafa ny fahombiazany. Na izany aza, talohan'ny nipetrahan'ny Etazonia ny sambon-danitra voalohany, dia nokapohin'ny Firaisana Sovietika ny tsirairay.
Namaly i Etazonia
Ny famantarana "tsipìka" avy amin'i Sputnik dia tsy nampahatsiahy fotsiny ny rehetra momba ny fahambonian'ny Rosiana, fa nanosika ny hevitry ny maro koa tany Etazonia. Ny valim-pifanarahana politika nataon'ny Sovietika "manakorontana" ny Amerikana ho any amin'ny sehatra dia nitarika vokatra mahaliana sy maharitra ela. dia nanomboka nanome vola ho an'ny tetikasa sata amerikana hafa.
Nandritra izany fotoana izany dia nanomboka niasa tao amin'ny tetikasa Explorer i Wernher von Braun sy ny ekipany ao amin'ny tafika Redstone Arsenal, izay natomboka tamin'ny seranan-tsambo tamin'ny 31 Janoary 1958. Vetivety dia nambara fa ny volana dia tanjona lehibe, misiona maromaro.
Ny fandefasana ny Sputnik koa dia nitarika mivantana ny famoronana ny National Aeronautics and Space Administration (NASA). Tamin'ny Jolay 1958, ny Kongresy dia nandalo ny National Aeronautics and Space Act (matetika antsoina hoe "Lalàna Espace"). Io hetsika io dia namorona ny NASA tamin'ny 1 Oktobra 1958, nanambatra ny Komity Nasionaly Mpanolo-tsaina momba ny Aeronautics (NACA) sy ireo sampan-draharaham-panjakana hafa mba hamorona fikambanana vaovao mikendry ny hametraka an'i Etazonia eny amin'ny sehatry ny serasera.
Ny modelin'i Sputnik fahatsiarovana io iraka mahatsiravina io dia mihantona ao amin'ny tranoben'ny Firenena Mikambana ao New York City, ny tranonkalan'ny Air and Space ao Washington, DC, ny World Museum ao Liverpool, Angleterre, ny Kansas Cosmosphere sy Space Center ao Hutchinson, LA, ny masoivoho Rosiana any Madrid, Espana, ary tranombakoka maro hafa ao Etazonia. Izy ireo dia fampahatsiahivana manjelatra ny andro voalohany amin'ny vanim-potoanan'ny kintana.
Navoaka ary nodinihan'i Carolyn Collins Petersen.
Ny hazo fihenam-bidy manafina miafina mena 7000 taona
Mitodika amin'ny Teleskaopy Espaniola manaraka
Marinera 4: Mijery voalohany an'i Amerika amin'ny Mars
Ny Tantara sy Lova avy amin'ny Tetikasa Mercury
Hubble sy ny gazy grenady
Fahadiovana eo amin'ny sehatra: Ahoana no anaovana azy?
Christa McAuliffe: Mpampianatra voalohany ao NASA
Ny Misiona miafina X-37B Orbiter amin'ny sehatra
Gene Cernan: Ny lehilahy farany handeha amin'ny volana
Ny fitsidihana ny Space Flight Center NASA
Ny Misiona Voyager
Dr. Mae C. Jemison: Astronaut sy Visionary
Vavaka ho an'ny Olomasina Cosmas sy Damian
"Heloka sy sazy"
Foto-kevitry ny filozofa grika sy romanina
Ny tahan'ny voa tsy an'asa
Foiben'ny tetikasa momba ny tetikasa momba ny Siansa momba ny Siansa
Inona no atao hoe teakanao?
Treblinka: Famonoana ny famonoan'i Hitler (famerenana)
Krismasy any Frantsa: tantara mahafinaritra Frantsay sy Anglisy
Aiza no hividianana lamasinina gymnastika
Ahoana ny fametrahana "Désirer" (faniriana)
Fivoriambe ao Lewis
Top Free Instrumentals Rap sy Beats Sites
Kolotsaina sy kolontsaina tanora ao amin'ny Repoblika Demokratika Alemana
Torolalana amin'ny fametrahana ny fandefasana anao amin'ny fanodinana
Ady faharoa: Supermarine Spitfire
Torolalana ho an'ny mpandidy momba ny tantara an-kira